Certificate In BM
Certificate In SM
Certificate in HR Payroll&Labour Law
Certificate in Payroll&Labour Law(New)
Certificate In HR Admin
Certificate In FA
Certificate In BE
Certificate in English4Skils
Certificate in English4Skills (New)
Certificate in English Grammar (New)
Japanese N5 Part (1)
Japanese N5 Part (2)
Diploma in BMA Part_1
Diploma In BMA Part_2
Diploma in SM Part_1
Diploma In SM Part_2
Diploma in HRM Part_1
Diploma In HRM Part_2
Diploma In Accounting Part_1
Diploma In Accounting Part_2
Strategic Mangement Part_1
Strategic Management Part_2
Diploma In FM Part_1
Diploma In FM Part_2
Diploma in Leadership Part _1
Diploma in Leadership Part_2
Diploma in IM Part_1
Diploma in IM Part_2
Diploma In PE Part_1(OSG)
Diploma In PE Part_2(OSG)
Diploma In SDM Part_1(OSG)
Diploma In SDM Part_2(OSG)
Diploma in DM Part_1(OSG)
Diploma in DM Part_2(OSG)
Diploma in SM Part-1 (NCFE)
Diploma in SM Part-2 (NCFE)
Diploma in HR Part-1 (NCFE)
Diploma in HR Part-2 (NCFE)
Diploma in BMA Part-1 (NCFE)
Diploma in BMA Part-2 (NCFE)
Mini MBA Part (1)
Mini MBA Part (2)
Diploma in OBM
Audio Tracks for DPE
Audio Track for speaking
Revision For DBA
Revision For CBA
Revision For CPHR
Revision for CBE
Mini MBA_OSG Exam
DBA Exam (OSG)
ICBA Exam (Cedar)
ICPHR Exam (Cedar)
ICBE Exam (Cedar)
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများတွင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူများ English ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်ထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်သုံးEnglish စကားကို Pro ကျကျပြောနည်; Meeting Roomတွေပြောနည်း၊
Company တစ်ခု ရဲ့ ဝန်ထမ်း အဝင်အထွက်၊
Company ဝန်ထမ်းတွေ ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Skill တွေ တိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာ၊ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို အကဲဖြတ်တာ၊ ဝန်ထမ်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲတာ စတာတွေကို ပြုလုပ်ရတဲ့ Career, Department ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Managementနဲ့ ပတ်သက်သော အခြေခံသဘောတရားများ ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးချနိုင်ဖို့အဓိက ထားသင်ကြားပေးသော အတန်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု တွေ ကို အခြေခံ က စပြီး လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခု ကို အခြေခံ မှ အောင်မြင်စွာ စတင်ပြီး Management နဲ့ ပတ်သက်သော အခြေခံသဘောတရားများ ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးချနိုင်ဖို့အဓိက ထားသင်ကြားပေးသော အတန်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ်
မိမိ၏ ရောင်းအား target တွေကို ဘယ်လိုplan တွေချမှတ်မလဲ၊
မဟာဗျူဟာမြှောက် အရောင်း နည်းလမ်း တွေ ချမှတ်ပြီးအရောင်းလမ်းကြောင်းဆွဲခြင်း၊အရောင်းခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း
အရောင်းတာဝန်ဝတ္တရားများ ကို သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ Sales and Marketing Management ပညာရပ်
​project တစ်ခု အား ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး Plan ကောင်းတွေ ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Project တစ်ခု ကို အကောင်းဆုံး စီမံ ခန့်ခွဲပြီး အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ အသေးစိတ် လေ့လာသင့်တဲ့ Operation & Project Management
Company တစ်ခု ရဲ့ဝန်ထမ်း အဝင်အထွက်၊ Company ဝန်ထမ်းတွေ ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Skill တွေ တိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာ၊ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို အကဲဖြတ်တာ၊ ဝန်ထမ်းတွေကို
HR Admin & Office
ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လိုနေရာ ချထားပေးမလဲ? Office System ကိုဘယ်လို အကောင်အထည်
ဖော်မလဲ? Office Manager ၊ Admin Executive အဖြစ်တက်လှမ်းချင်သူများအတွက် အဓိကအရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကဘာတွေလဲ? Office Admin တစ်ယောက်မှာ ဘယ်လို Skills တွေရှိသင့်လဲ၊မွေးမြူသင့်တဲ့ အချက်တွေကဘာတွေလဲ ?
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံ နဲ့ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု
အကြောင်း တွေ ကို လေ့လာပြီး ငွေကြေးနဲ့
ပါတ်သတ်တဲ့ Finance စာရင်းနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ Accounting ပညာရပ် တွေ ပေါင်းစပ်ထား
English Speaking & English4Skills
English စာ နဲ့ပတ်သတ် ရင် အရေး၊အဖတ်၊အပြော တွေ အားလုံးကို အခြေခံ က စပြီး ပိုင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။Basic Level က စတင်ပြီး Grammar ကို ပိုင်နိုင်တဲ့ထိ လေ့လာနိုင်ပြီး ဝါကျတည်ဆောက်ပုံ တွေ ၊စည်းစနစ် မှန်ကန်တဲ့ ရေးနည်း တွေ အပြင် ဝါကျ အထာအသိုမှန်မှန် ပြောဆိုနိုင်အောင် ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အဓိက အကျဆုံးလေ့လာသင့်တဲ့ ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများတွင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူများ English ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်ထိရောက်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်သုံးEnglish စကားကို Pro ကျကျပြောနည်; Meeting Roomတွေပြောနည်း၊English စာနဲ့Presentation လုပ်နည်းများကို စနစ်တကျသင်ကြားပေးမှာပါ။
Japanese N5, N4
ဂျပန်စာကို အခြေခံမှစပြီး စနစ်တကျလေ့လာလိုသူများ၊လစာကောင်းကောင်းဖြင့် Chinese Company များတွင် အလုပ်ဝင်လိုသူများ၊Japanese translator တစ်ယောက်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလိုသူများအတွက် အမြန်ဆုံး နဲ့ အထိရောက်ဆုံးသင်တန်း
Head Off Contact
17/1ft, A2, Parami Street,16Qt,
Haling Tsp, Yangon.
Phone : +9595015405
Email : hext@paramieducation.com
© 2023 by paramieducation Proudly created with Hext